ဝါယာကြိုးတောင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - China Wire Baskets Factory
303 စီးရီး clip-on ကျဉ်းသောဆွဲထုတ်လျှောဝါယာကြိုးခြင်းတောင်းအံဆွဲ
မိတ်ဆက် 303 စီးရီး clip-on ကျဉ်းမြောင်းသောဆွဲထုတ်လျှောဝါယာကြိုးတောင်းအံဆွဲ။ သူတို့တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီး DIY ဖော်ရွေ။ သင်မည်သည့်စီးရီးကိုသင်လိုအပ်မည်ကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်မေးခွန်းများကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ပစ္စည်းအမှတ် .: 303
310 စီးရီးဘေးဘက်တိတ်ဆိတ်ပျော့ပျောင်းသောသတ္တုလျှောဝါယာကြိုးတောင်းအံဆွဲ mount
မိတ်ဆက်310 စီးရီးဘက်မှအသံတိတ်ပျော့ပျောင်းသောသတ္တုလျှောဝါယာကြိုးတောင်းခြင်းအံဆွဲတပ်ဆင်ပါ သူတို့တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီး DIY ဖော်ရွေ။ သင်မည်သည့်စီးရီးကိုသင်လိုအပ်မည်ကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်မေးခွန်းများကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။
312 Series elliptical ပြားချပ်ချပ်သံကျဉ်းသော chrome မီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်များအတွက်ဝါယာကြိုးတောင်းအံဆွဲထုတ်
မိတ်ဆက်312 Series elliptical ပြားချပ်ချပ်သံကျဉ်းသော chrome မီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်များအတွက်ဝါယာကြိုးတောင်းအံဆွဲထုတ်။ သူတို့တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီး DIY ဖော်ရွေ။ သင်မည်သည့်စီးရီးကိုသင်လိုအပ်မည်ကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်မေးခွန်းများကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ပစ္စည်းအမှတ် .: 312
မိတ်ဆက်321 စီးရီးဘက်ခြမ်းမီးဖိုချောင်ဗီဒိုများအတွက်သတ္တုလျှောဝါယာကြိုးတောင်းခြင်းအံဆွဲဆွဲထုတ်။ သူတို့တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီး DIY ဖော်ရွေ။ သင်မည်သည့်စီးရီးကိုသင်လိုအပ်မည်ကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်မေးခွန်းများကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ပစ္စည်းအမှတ် .: 321
322 စီးရီးအကြီးအသေးနှစ်ခုအလွှာခြမ်းသတ္တုလျှောဝါယာကြိုးတောင်းအံဆွဲ mount
မိတ်ဆက် 322 စီးရီးကြီးမားသောနှင့်သေးငယ်သောအလွှာနှစ်ဖက်စလုံးတွင်မီးဖိုချောင်ခန်းများအတွက်သတ္တုလျှောဝါယာကြိုးတောင်းခြင်းအံဆွဲ။ သူတို့တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီး DIY ဖော်ရွေ။ သင်မည်သည့်စီးရီးကိုသင်လိုအပ်မည်ကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်မေးခွန်းများကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ပစ္စည်းအမှတ် .: 322
မိတ်ဆက် မီးဖိုချောင်ဗီဒိုများအတွက်ပြားချပ်သောသံဝါယာကြိုးတောင်းအံဆွဲ 325 Series ကြီးမားပြီးသေးငယ်သည့်နှစ်ဖက်စလုံး။ သူတို့တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီး DIY ဖော်ရွေ။ သင်မည်သည့်စီးရီးကိုသင်လိုအပ်မည်ကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်မေးခွန်းများကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ပစ္စည်းအမှတ် .: 325
မိတ်ဆက် 331 စီးရီးနှစ်ခုအလွှာခြမ်းသတ္တုလျှောဝါယာကြိုးတောင်းကိုမီးဖိုချောင်ဗီဒိုများအတွက်အံဆွဲထုတ်။ သူတို့တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီး DIY ဖော်ရွေ။ သင်မည်သည့်စီးရီးကိုသင်လိုအပ်မည်ကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်မေးခွန်းများကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ပစ္စည်းအမှတ် .: 331
မိတ်ဆက် 332 စီးရီးမီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်ဘေးထွက်ဝါယာကြိုးတောင်းကိုမီးဖိုချောင်ဗီဒိုများအတွက်အံဆွဲထုတ်။ သူတို့တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီး DIY ဖော်ရွေ။ သင်မည်သည့်စီးရီးကိုသင်လိုအပ်မည်ကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်မေးခွန်းများကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ပစ္စည်းအမှတ် .: 332
မီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်များအတွက်ဘောင်နှင့်အတူ 341 စီးရီးသတ္တုလျှောဝါယာကြိုးရာသီဥတုခြင်းတောင်းတောင်းကိုအံဆွဲ
မိတ်ဆက် မီးဖိုချောင်ဗီဒိုများအတွက်ဘောင်ပါ ၀ င်သည့် ၃၁၁ စီးရီးသတ္တုလျှောဝါယာကြိုးရာသီအလိုက်တောင်းခံသည့်အံဆွဲ။ သူတို့တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီး DIY ဖော်ရွေ။ သင်မည်သည့်စီးရီးကိုသင်လိုအပ်မည်ကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်မေးခွန်းများကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ပစ္စည်းအမှတ် .: 341
351 စီးရီးခြမ်း 18 "ပျော့အနီးကပ်ဖုံးကွယ်လျှောနှင့်အတူဝါယာကြိုးတောင်းအံဆွဲ mount
မိတ်ဆက် 351 စီးရီးခြမ်း 18 "ပျော့အနီးကပ်ဖုံးကွယ်လျှောနှင့်အတူဝါယာကြိုးတောင်းအံဆွဲ mount ။ သူတို့တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီး DIY ဖော်ရွေ။ သင်မည်သည့်စီးရီးကိုသင်လိုအပ်မည်ကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်မေးခွန်းများကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ပစ္စည်းအမှတ် .: 351
401 Series2အလွှာဇယားကွက် chrome သည်အောက်ခြေတောင်အံဆွဲလမ်းညွှန်ဖြင့်ဝါယာကြိုးတောင်းအံဆွဲကိုဆွဲထုတ်သည်
မိတ်ဆက် 401 Series2အလွှာဇယားကွက် chrome သည်အောက်ခြေတောင်အံဆွဲလမ်းညွှန်ဖြင့်ဝါယာကြိုးတောင်းအံဆွဲကိုဆွဲထုတ်သည်။ သူတို့တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီး DIY ဖော်ရွေ။ သင်မည်သည့်စီးရီးကိုသင်လိုအပ်မည်ကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်မေးခွန်းများကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ပစ္စည်းအမှတ် .: 401
402 Series gridwall သည်သတ္တုလျှောဝါယာကြိုးတောင်းခြင်းအံဆွဲများကိုဆွဲထုတ်သည်
မိတ်ဆက် 402 Series gridwall သည်သတ္တုလျှောဝါယာကြိုးတောင်းခြင်းအံဆွဲများကိုဆွဲထုတ်သည်။ သူတို့တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီး DIY ဖော်ရွေ။ သင်မည်သည့်စီးရီးကိုသင်လိုအပ်မည်ကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်မေးခွန်းများကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ပစ္စည်းအမှတ် .: 402